musha nyika dzakabatana WWE Superstars Bobby Lashley Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Our Bobby Lashley Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yehudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Ex-Mudzimai (Kristal Marshall), Vana (Myles, Kyra, naNaomi).
Moreso, hanzvadzi dzaLasley (Cathy Lashley, Jessica Ashley, naFrances Lashley), Hupenyu hweMunhu, mambure akakosha, Mararamiro, uye Muhoro.
Nemashoko akareruka, tinokupa mufananidzo wepfungwa weNhoroondo yeHupenyu yaBobby Lashley, nyanzvi yekuAmerica wrestler, musanganiswa wemitambo yetsiva, uye murwi wemauto.
Yedu Biography inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika ave nemukurumbira.
Kuti uwedzere rudo rwako rweBiography, isu tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwaBobby Lashley. Pasina kupokana, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupikisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Bobby Lashley Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pakuzvarwa kusvika Kubudirira Kwake Nyaya.
Ehe, isu tinomuziva iye nekuda kwesimba rake rakakura remuviri uye Total Nonstop Action uye Impact Wrestling. Kunyangwe akarumbidzwa, takaona kuti vashoma vanhu vane zvakadzama nhoroondo yehupenyu hwake.
Naizvozvo, isu takaona zvakakodzera kuti tikushandirei inonakidza nyaya yaBobby Lashley uye nekuparara kweiye mutsimba uye MMA chiitiko kusvika zvino. Tichifunga izvi mupfungwa, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Bobby Lashley yehucheche nyaya:
Kune ekutanga maBiography, ane mazita emhete - Blaster Lashley kana Bobby Lashley. Franklin Roberto Lashley akazvarwa pazuva re16th raJuly 1976 kuna amai vake, Clara Lashley, uye baba, US Army drill sergeant.
Akazvarwa muJunction City, Kansas, iyo US, semwana wekupedzisira pakati pehanzvadzi dzake nhatu vakuru (Cathy Lashley, Jessica Ashley, naFrances Lashley).
Bobby Lashley akazvarwa pamwe nekubatana kwevabereki vake asi akarerwa naamai vake. Pazasi pane mufananidzo waamai vaBobby Lashley, Clara Lashley.
Mufananidzo waamai vaBobby Lashley, Clara Lashley.
Bobby Lashley akaona kurambana pakati paamai vake, Clara Lashley, nababa vake achiri mudiki. Nekuda kweizvozvo, kukura mumhuri yemubereki mumwe naamai vake uye hanzvadzi nhatu dzakura.
Mufananidzo wepakutanga wemwana waBobby Lashley.
Sechikamu chechiitiko chake chehuduku, Bobby Lashley akarondedzera kuti hanzvadzi dzake huru dzaiwanzoenda naye sei kuhuni ndokuzomusunga kwemaawa.
Chakanga chiri chiitiko chisingakanganwiki kumhuri yacho. Vhidhiyo iri pasi apa inoratidza Bobby Lashley achitaura nyaya yake.
Nekudaro, vabereki vake vasati vaparadzana, mhuri yaBobby Lashley dzimwe nguva yaitama kubva kune imwe nzvimbo yechiuto ichienda kune imwe nekuda kwebasa rababa vake.
Nhanganyaya yake yeAmateur wrestling aive ari mugiredhi rake rechinomwe kuchikoro. Wrestling yaive imwe yenguva-yekutsiva nhabvu.
Nekudaro, zvakazoitika, Bobby Lashley akadanana nemutambo wewrestling uye akaomerera nawo.
Mufananidzo wehucheche waBobby Lashley pamwe nehanzvadzi dzake nhatu.
Bobby Lashley Mhuri kumashure:
Sezvatakambotaura, kuparadzana kwevabereki vake kwakaita kuti akure naamai vake nehanzvadzi nhatu. Saka, akakurira mumusha wevarombo.
Amai vaBobby Lashley, Clara Lashley, vakatamburira kuwana basa rakanaka mune rimwe kuti vawane chouviri. Vaiva vasina zvokuita nazvo.
Bobby Lashley Mhuri Kubva:
Sezvambotaurwa, Franklin Roberto Lashley akaberekerwa muGeary County, anozivikanwa seJunction City.
Guta rine zita rekuti Junction nekuti tinoriwana pachikomo chinopfungaira uye nzizi dzeRepublican, ese ari muKansas, United States.
Nekudaro, baba vaBobby Lashley ndevekwaPanamani. Panama isangano rinotaura mitauro yakawanda uye rine tsika dzakasiyana. Nyika inogara vanhu vemarudzi akasiyana siyana uye zvitendero.
Nokureva, Bobby Lashley muAfrica -America uye anobva kuKansas. Pazasi pane mufananidzo wemumiriri weiye mutsimba, musanganiswa wemauto, uye nemhare yemauto.
Mepu inoratidza midzi yaBobby Lashley (Junction City, Kansas, US.)
Basa raBobby Lashley Rokutanga:
Nguva pfupi yapfuura chikoro chepuraimari, Bobby Lashley akapinda muAmateur Wrestling. Mutambo wekurwa wakatanga senge isiri yemwaka-mutambo mumwe mutambo kusvikira awira murudo nawo.
Nekuda kweizvozvo, akaramba achitora chikamu mumakwikwi ewrestling panguva yese yake yekudzidza.
Bobby Lashley - iye ega mutema kumberi kumberi, panguva yake yekutanga.
Bobby Lashley aive chikamu cheNational Association yeIntercollegiate Athletics (NAIA). Nekudaro, akave weNational Wrestling Champion muNAIA mune 177 lbs chikamu muna 1996,1997, uye 1998.
Mushure mekoreji, akatevera baba vake muuto uye akakwikwidza mumitambo yeamateur muuto reWorld-Class Athlete Chirongwa.
Bobby Lashley akahwina menduru yesirivheri negoridhe mumakwikwi eInternational Military Sports Council yemahara freestyle yemakwikwi evarwi. Akapedza angangoita makore matatu muchiuto.
Bobby Lashley - achiri kumateur amateur muuto reWorld-Class Athlete Chirongwa.
Kuti vakwanise Team USA mumitambo yeOlympic ya2004, Lashley akaenderera mberi nekudzidziswa muColorado Springs.
Akaona kubirwa kwebhangi uye akasundirwa kudivi rekuhwanda kuti arege kupfura pfuti panguva iyoyo. Chiitiko ichi chakakonzeresa kukuvara kwemabvi kwaida kuvhiyiwa, kupedzisa basa rake reamateur.
Bobby Lashley Dzidzo:
Franklin Roberto Lashley akaenda kuFort Riley Middle School. Yaive mune icho chikoro iye akaziviswa kune Amateur mutsimba achiri mugiredhi rechinomwe. Mushure meizvozvo, akatamira kuJunction City High Chikoro, kwaakaramba achirwa.
Zvishoma nezvishoma, apedza chikoro chesekondari, akaenderera kuMissouri Valley College, kwaakazova National Wrestling Champion.
Mushure memakore mana achidzidza kuyunivhesiti, akapedza degree reBachelor muvanhu-sevhisi manejimendi manejimendi uye kutandara manejimendi.
Maonero ekunze ezvekuti chikoro chake chinotaridzika sei.
Bobby Lashley Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Nguva pfupi mushure mekukuvara kwakapedza mutambo wake weamateur, akasaina kondirakiti. WWE yakasaina chibvumirano chekuvandudza naBobby ndokumuendesa kuOhio, kwaakapedza kosi yake.
Akave katatu-nguva National Amateur Wrestling Champion, mana-nguva All-American, maviri-nguva Hondo Yemasoja, uye 2002 Sirivhi mukwikwidzi kuMasoja Global Kukwikwidza.
2002 Sirivheri prizewinner kuMasoja Global Kukwikwidza.
Pakati pe2005, Lashley akaita zviratidziro zvina pazviitiko zvina zvehupenyu zveWWE wrestling mumitambo yakasviba yeRaw uye SmackDown! Brands.
Gare gare, akaita terevhizheni yake WWE kutanga sechiso paSmackDown! pasi pechiratidzo chake chaicho.
Mumutambo wake wekutanga, akahwina Simon Dean. Iye akabva adzokorora iyo feat mumubhadharo-wega-maonero ekutanga kuNo Mercy. Kubva ipapo, Lashley akakunda akawanda mashura makuru paSmackDown! uye Raw.
Bobby Lashley Biography - Simuka kune mukurumbira:
Pazuva rechitanhatu raNdira 6, Lashley akabuda seyekutanga SmackDown! Wrestler kuti akwanise 2006 Royal Rumble. Zvizhinji gare gare muna 2006, Lashley akatamira ku (Extreme Elimination Chamber) ECW brand.
Akabvisa Test uye The Big Show nepiniki zvichitevera pfumo rekubuda seEECW Global Champion nyowani, zvichimuita wekutanga Africa -America kuhwina mukwikwidzi uye wechitatu mukwikwidzi wepasi rose weAfrican-America kubvira nhoroondo yeWWE.
Muna 2007, Bobby akasunungurwa kubva kuWWE. Achienderera mberi nekuburitswa kwake, akarwa mumisangano yakakwikwidzana yakadai seAAA, TNA Wrestling, Strikeforce, Bellator MMA, Sharkfight, nevamwe vazhinji.
Lashley paWWE imba yekuratidzira muna Chivabvu 2007.
Lashley akawana mukana wake wakasanganiswa wemartial arts kuMixed Fighting Alliance (MFA) pazuva regumi nematatu raZvita 13.
Akatora kukunda kuburikidza neTKO (kucheka) pamusoro paJoshua Franklin mumasekondi makumi mana emaround ekutanga. Makore gumi gare gare, mu41, akadzokera kumubatanidzwa weWWE muRaw Brand.
Kubva paakadzokera kuWWE, Franklin Roberto Lashley, anonziwo The Boss, akabata mashoma mazita anokosha. Iye akabuda semupi mubayiro weWWE United States Championship.
Tarisa 7-nguva World Champion muProfessional Wrestling.
Moreso, iyo WWE Championship munaKurume 2021. Lashley inguva nomwe-yakazara mukwikwidzi mumutambo wewrestling. Pazasi pechikamu cheakakunda kukunda kwaBobby Lashley.
Ndiani Bobby Lashley Kufambidzana?:
Zvino, Bobby Lashley haana kuroora. Angave anga achinyanya kutarisa zvakanyanya pabasa rake reWWE. Haana kuburitsa pachena zvehukama chaihwo-hwehupenyu hwehukama kwechinguva ikozvino.
Nekudaro, Runyerekupe rune icho chekuti Franklin Roberto Lashley aifambidzana nemukadzi mutsimba uye mumwe WWE nyeredzi Lana, CJ Perry. Pamusoro pazvo zvese, hukama hahufanirwe kuvhurwa.
Pane kongiri yekongiri, Bobby aive muhukama neAmerican modhi uye nyanzvi wrestler Kristal Marshall kubva 2007 kusvika 2010.
Vaviri ava vane vana vaviri. Kristal Marshall wedzinza reBarbadian. Akauya pasi pano pazuva regumi nerimwe raNovember muna 11 muLos Angeles, California.
Mufananidzo waKristal Marshall; Booby Lashley's Ex-Wife.
Kristal aimbova WWE Diva uye akasiya basa wrestler. Nehurombo kune vaviri ava, vaive vatoparadzana mwana wavo wechipiri asati azvarwa. Ivo vaviri vakasimbisa kupatsanurwa kwavo pasocial media.
Sezvineiwo, Bobby Lashley aive muhukama hwekare asati adanana naKristal Marshall. Kunyangwe isu tisingazive izvo mukadzi anoshevedzwa, iye ane mwanasikana naye.
Bobby Lashley neaimbova murume wake, Kristal Marshall.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Bobby Lashley Vana - Kyra:
Mwana wekutanga weAfrican-American wrestler musikana anozivikanwa saKyra. Iye akazvarwa mu2005 kubva kumubatanidzwa pakati paBobby Lashley nenyaya yake yekutanga. Zvinyorwa zvemukadzi uye amai veKyra zvichiri kufambiswa pachena.
Akanaka Kyra pazuva rake rekuzvarwa.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Bobby Lashley Vana - Myles:
Isu tinoziva mwana wechipiri waBobby uye mwanakomana mumwe chete saMales. Iye akazvarwa mumubatanidzwa pakati paLashley naKristal Marshall muna Chikunguru 2008.
Kungofanana naBobby ndiye oga mwanakomana wevabereki vake, saizvozvowo Myles. Hazvishamise kudakadza kwerudo uye kudyara maari.
Myles ndiko kupereta kwakasiyana kweMiles, kunoenderana naNorman mavambo. Zita rakanaka rechiLatin sezita rekuti 'mamaira' zvinoreva 'musoja' kana musoja mutumwa waMwari. ' Myles, sezvakataurwa naBobby, ndiye mutambi wake mukuru.
Parizvino, Myles aratidza kufarira kweMitambo. Saka, anofarira kutamba baseball. Aigona kutora nhanho dzababa vake, Bobby. Iyo young chap ihama ine hanya uye ine rudo kune vanin'ina vake, kunyangwe zvake achiri mudiki.
Ona iye oga mwanakomana waBobby Lashley.
Nezve Bobby Lashley Vana - Naomi:
Mwanasikana wechipiri waBobby Lashley nemwana mudiki, Naomi, ndiye musikana mudiki waBaba. Iye akazvarwa mu2011. Iye anodakadza Naomi ndiye munin'ina waMales Lashley uye nhanho-hanzvadzi yaKyra Lashley.
Naomi mucherechedzo wechikadzi wechiJudha wechiHebheru. Zita rinoreva 'kufadza.' Runako rwechidiki mwana anoshinga uye anofara. Iye ane chaanofarira mujimnastiki, tsiva, kutamba, uye mimwe mitambo yakawanda.
Saizvozvo, iye ane shungu uye ane chiroto chekuve nyanzvi. Kunze kwezvo, iye mudiki Naome runako rwekufananidza naamai vake, Kristal Marshall. Fungidzira kuti sei achidanwa kunzi musikana mudiki wababa.
Mufananidzo wacho unoratidza Myles Lashley, Kris Marshall, naNaomi Lashley.
Bobby Lashley Hupenyu Hwemhuri:
Kubudirira kweAfrican-American wrestler uye Mixed Martial Artist ingadai yakave mirairi parutivi kubva pasiratidziro yekuratidzira yerudo nekutarisirwa nenhengo dzemhuri yake. Pane ino noti, ngatitorei rumwe ruzivo muhupenyu hwavo hwega.
Bobby Lashley mumufananidzo wemhuri.
Nezve Mubereki waBobby Lashley - Baba:
Sezvinowanzo danwa nevateveri vake vari kusimuka, mudzvinyiriri wekubika aive nekanguva kadiki nababa vake vachikura.
Chikonzero chekutanga chaive kupatsanurwa kwekutanga pakati pevabereki vake. Baba vaBobby vaive vasina-kutumwa mushandi muSevhisi yeUSA.
Aive murairidzi wechibhorani. Basa rake chairo raisanganisira kudzidzisa tsoka tsoka, nhanho dzechiuto, uye kufora. Nekuda kweizvozvo, vaigara mumabharaki. Moreso aifanirwa kutama kubva kune imwe imba yemabharaki kuenda kune imwe zvichibva muchirongwa chemauto chazvino.
Mufananidzo weimwe yemabharaki, Baba vaLashley vakagara.
Kunyangwe isu tisingazive zvaanodanwa, akaroora amai vaBobby Lashley, Clara Lashley.
Vaviri ava vaive nevana vana vese, vanasikana vatatu (Cathy Lashley, Jessica Lashley, naFrances Lashley) nemwanakomana (Bobby Lashley). Nehurombo, vaifanira kurambana Bobby achiri mudiki.
Nezve Amai vaBobby Lashley - Clara Lashley:
Unhu hunoshanda uye hwakasimba nechairo chekubudirira aive amai vaLashley, Clara Lashley.
Kunyangwe muchato nerudo rwehupenyu hwake hwaive hwepfupi, akararama hupenyu husingaperi. Haana kumbobvira apererwa nematambudziko ake.
Iye wemuAfrica -America mutsimba uye Akasanganiswa Martial Artist anomutsanangura iye semukadzi akamudzidzisa kureruka kwemufaro. Zvisinei nemamiriro ezvinhu aakawanikwa maari, unogona kuva nechokwadi chekugara uchimuona achinyemwerera.
Mufananidzo waAmai vaBobby Lashley - Clara Lashley.
Chikonzero icho Bobby anoti ane tarisiro yakawandisa nhasi chakanangana nekuda kwaamai vake vakanaka.
Aifanira kukwikwidza pakati pemabasa kuti awane chekurarama nekutarisira vanasikana vake vatatu (Cathy Lashley, Jessica Lashley, naFrances Lashley) nemwanakomana wake mumwechete (Franklin Roberto Lashley, anozivikanwa saBobby).
Mufananidzo wakaswededzwa waBobby Lashley naamai vake.
Bobby Lashley Vanun'una:
Sezvambotaurwa, Bobby Lashley akauya munyika ino semudiki pahanzvadzi dzake nhatu dzakura, Cathy Lashley, Jessica Lashley, naFrances Lashley.
Ivo vatatu vakatora mutsara mumwechete sababa vavo nekujoinha United States Mauto. Chirevo chinoti mumwe wavo achiri kushanda muchiuto muUS Air Force kubva muna 2015.
Nezve Bobby Lashley Relatives:
WWE Champion ndeyemhuri inoshanda nesimba kuchengetedza ruzivo rwemhuri yavo rwakangwara.
Zvisinei, Bobby Lashley anofanirwa kunge aine dzimwe hama parutivi pevabereki vake uye hama. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Asina hanya nechirongwa chakabatikana chakabatanidzwa nehupenyu hwenhabvu weW Star WWE, anoronga zororo. Bobby Lashley, munguva yake yemahara, anofarira kurovedzwa kunzvimbo yekurovedza muviri, kuimba, uye kuita.
Moreso, Bobby Lashley anoda Kuverenga Mabhuku, kuchovha bhasikoro, kusimudza uremu, Kutasva Bhiza, uye pamusoro pazvose, kuve neMwanakomana wake (Myles) nevanasikana (Kyra naNaomi). Anopedza nguva yakawanda nevana vake.
Anoshandisa yakawanda yenguva yake nevana vake.
Uye zvakare, nhabvu ichiri chishuwo. Bobby Lashley akakunda moyo yevafudzi vake vari kuwedzera. Kuvapo kwake kwesocial media kunokwezva nhamba iri kuwedzera yevateveri.
Iyo Instagram mubato une vangangoita 1.1M vateveri, 200k pa Twitter, uye ingangoita 1M paFacebook.
Bobby Lashley Mararamiro:
Iwe unofungei ivo vatambi vepamusoro veWWE vatambi vanofarira Jon Jones, Kamaru Usman, Dustin Poirer, nevamwe vazhinji vanoita nemamirioni avo ese? Vanozvishandisa pamotokari dzepamusoro, Kubva Ferraris kuenda kuMcLarens uye Porsches kuenda kuLamborghinis nedzimba dzinodhura.
Mukupesana, Bobby Lashley ane maonero akasiyana nezve ake mararamire. Haazvipambadze nemota dzepamusoro kana zvishongo zvinodhura. Sekureva kwake, zviri nani kwazvo kuchengetedza nekudyara pane kushandisa uye kuwanda.
Kune nzira dzinoverengeka Bobby Lashley akaita mari neakawanda mapurofesa semutambi, mukuru webhizinesi, uye mutsimba. Huye, huwandu hunofungidzirwa hwaBobby Lashley, sekureva kweForbes 2018 mushumo, ingangoita mamirioni matanhatu emadhora.
Nekudaro, sekureva kwezviverengero zve2021, iyo netiweki yakafungidzirwa kunge ingangoita mamirioni manomwe emadhora. Zvakare, Bobby Lashley muhoro wepagore unofanirwa kuvhara $ 7 miriyoni Us madhora.
Bobby Lashley Untold Chokwadi:
Asides kubva kune iyo info yakapihwa pamusoro, heano mashoma echokwadi ayo achakunetsa iwe nezvaBobby Lashley nebasa rake rekurwa kusvika parizvino.
Chokwadi #1: Bobby Lashley Bhizinesi mabhizimusi:
Lashley akapinda mune dzinoverengeka bhizinesi bhizinesi. Akavhura shopu yehutano smoothie muna 2007.
Muna Chikunguru 2009, akazivisa iyo Lashley Network yewebhusaiti inosanganisira yake yepamutemo gym, chitoro chekudya, uye enhau enhau mapeji. Lashley akavhura imwe jimu gare gare, iyo inoenda ne'American Top Team Kukwidza 'muColorado.
Mufananidzo waBobby achiratidza pahembe rake chimwe chezvigadzirwa zvebhizinesi rake.
Chokwadi # 2: Mamwe midhiya:
Lashley akazoonekwa mumitambo yemavhidhiyo WWE SmackDown vs. Raw 2007 uye WWE SmackDown vs. Raw 2008. Akawana mukana wake wekutanga mumutambo wevhidhiyo weWWE mumakore gumi nerimwe, achionekwa semunhu anotora pasi WWE 11. Iye zvakare anoonekwa muWWE 2019 .
Chokwadi #3: Bobby Lashley Filmography:
Kunze kwekuve mutsimba, Bobby Lashley akaitisa mumamuvhi mashoma nemitambo yeTV senge Iyo Hondo, Beatdown, Ropa Kunze, Deal kana Kwete Deal, uye Rush Hour. Iye ane, pamusoro pezvo, akaverengerwa muvhidhiyo yemumhanzi yakanzi 'Nightmare.' Yake yekutanga bhaisikopo zita ndiyo Nzira yeHondo.
Yake yekutanga bhaisikopo zita ndiyo Nzira yeHondo.
Chokwadi #4: Bobby Lashley Tattoo:
Kunyangwe zvisiri kunyatsooneka pakutanga kuona. MuAfrica -American wrestler uye Mixed Martial Artist akanyora kuruboshwe Biceps - Murume ane nyanga ine nyanga. Icho tattoo.
Iyo Champ yakanyora kuruboshwe Biceps - Murume ane nyanga ine nyanga.
Chokwadi # 5: Mazita akunda:
Pfupiso yemazita aakasanganisira asi haaganhurire aya:
Iye anokunda-nguva-ina-mukombe we 'TNA World Heavyweight Championship.'
Akakunda Iyo 'TNA King yeMakomo Championship.'
Akagamuchira mubairo weiyo 'TNA X Division Championship.'
Iyo 'TNA King yeMakomo Championship.'
Iye akunda iyo 'WWE United States Championship.'
Chokwadi # 6: Iko mukana wekurega basa:
Bobby akadonhedza zano pamudyandigere. Akaratidza kuti basa rake riri kupera nokukurumidza. The Champ ane makore gumi kusvika gumi nemashanu dai muviri wake waimutakura.
Nekuda kweizvozvo, Lashley anofanira kuita zvese zvaanogona paanenge achikwanisa—hazvishamisi kuti anozvimanikidza kuti apedze zvakawanda mukati menguva pfupi.
Bobby Lashley Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso inokurumidza yenyaya yehupenyu hwake, shandisa tafura iri pazasi. Tafura yacho inokupa ruzivo rwakajeka nezve weAmerican nyanzvi mutsimba, musanganiswa wemauto, uye murwi wevashandi.
Zita rizere: Franklin Roberto Lashley
Mhete zita (s) Blaster Lashley, The Real Deal, Nhema Lesnar uye Iyo Bhosi
Iyo Inomanikidza Cooker
Zuva rekuzvarwa: 16th Zuva raJuly 1976
Nzvimbo yekuzvarirwa: Junction Guta, Kansas, United States
Basa: MuAmerican wrestler, musanganiswa wemauto, nemauto veteran
Dzidzo: Junction City High Chikoro, US
Missouri Valley College, Marshall, Missouri, US
(BA musangano revashandi vevanhu uye manejimendi manejimendi)
Baba: Asingazivikanwe asi Drill Mudzidzisi muUS Army
Amai: Clara Lashley
Sisters: Cathy Lashley, Jessica Lashley naFrances Lashley.
Wife / Wawakaroora: Kristal Marshall
Vana: Kyra Lashley, Myles Lashley
Net Worth: $ 6 mamirioni (inorambidza 2018)
Mukuputira yaBobby Lashley's Biography uye Yehucheche Hupenyu Nyaya, isu tinofungidzira iwe wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Hapana chinhu muhupenyu chisingadzivisike. Uye pakupedzisira, haugone kudzora mhedzisiro yezvinhu. Zvisinei, tinogona kutora zvimwe zvezvimwe zvinhu.
Wevashandi anoisa pabasa rake uye maitiro paanenge achizviita zvine basa zvakanyanya. Mafirosofi aBobby Lashley agara akanaka, uye ndizvo zvakaitawo kutyaira kwake. Kunyangwe kurambana pakati pevabereki vake kwaisazomutadzisa.
Kupererwa kwake, kutsunga, uye kusimba kwaive kwechipiri kune hakuna. Nekufara zvakakwana, maitiro ake akabhadhara zvakanyanya. Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-kumusoro kunonakidza uye kunonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.